Saldhigga Melleteri Ee Dowladda Imaaraatka Carabta Ka Dhisayso Magaalada Berbera Yaa Ku Faa'iidaya Yaase Ku Khasaaraya? Warbixin.
Monday February 13, 2017 - 08:48:10 in Wararka by Super Admin
UAE iyo 'Somaliland' ayaa Heshiisyo mugdi badan dhaliyay kala saxiixday
Xildhibaanada maamulka Hargeysa ayaa isku maandhaafay heshiiskan oo walaac badan ay ka muujiyeen qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanada loo yaqaan ‘Somaliland’.
Heshiiska ayaa awood dhaqaale iyo mid melleteri siinaya imaaraadka Carabta oo horay ula wareegay marsada caalamiga magaalada Berbera.
Axmed Siilaanyo oo ku magacaaban madaxweynaha ‘Somaliland’ ayaa sheegay in heshiiska ay la saxiixdeen dowladda Imaaraatka carabta ay ku bedesheen lacago malaayiin dollar ah oo qaab ganacsi loogu maalgelinayo deegaanada maamulkaasi ka arrimiyo.
Culimaa’udiin iyo siyaasiyiin ku sugan Hargeysa ayaa kasoo horjeestay heshiiskan melleteri ee Imaaraatka u ogolaanaya in saldhig weyn ay ka dhistaan magaalada Berbera, cabsida laga qabo saldhiggan ayaa ah in Imaaraadku ay saldhigga ubedelaan meel lagu tababaro maleeshiyaadka RRU-da ee qaabilsan ladagaallanka waxa loogu yeero Argagaxisada iyo in imaaraatku si dadban ula wareegaan dhaqaalaha deegaanka.
Qodobada Heshiiskan ku cad waxaa kamid ah in maamulka ‘Somaliland’ uusan aheyn mid ka go’ay Soomaaliya balse uu yahay maamul hoosaad umadax banaan arrimihiisa maamul.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dowladda Itoobiya ay cabsi ka muujinayso in imaashiyaha Imaaraatka ee Berbera uu gaabis geliyo arrimaheeda ganacsi.
Itoobiya ayaa isbuucii lasoo dhaafay u yeertay wasiirka arrimaha dibadda ‘Somaliland’ kaasi oo R/wasaaraha Itoobiya kula kulmay magaalada Addis Ababa.
Itoobiyaanka ayaa ka cabsi qabta in saraakiisha Imaaraatka Carabta ay Koontaroollaan alaabaha ay kalasoo degaan dekadda Berbera iyo kuwa ay ka dhoofsadaan, waxaana la sheegay in Itoobiyaanku si aan xisaab laheyn u isticmaalaan Marsada magaalada Berbera.
illaa iyo hadda mugdi badan ayaa kujira ujeedka ay Imaaraatka Carabta ka leeyihiin saldhigga melleteri oo ay ka furanayaan dalka Soomaaliya, iyadoo la ogyahay in Imaaraatku uu qeyn ka yahay xamlada Argagaxisa ladirirka loogu magac daray ee mareykanku ku qaaday wadamada caalamka islaamka.